दुई पत्नीहरूले गरेका थिए श्रीमानलाई यसरी बाँड्ने सम्झौता, तर जब एउटीले सम्झौता तोडिन्…. - Alert Khabar
Homeमनोरञ्जनदुई पत्नीहरूले गरेका थिए श्रीमानलाई यसरी बाँड्ने सम्झौता, तर जब एउटीले सम्झौता तोडिन्….
दुई पत्नीहरूले गरेका थिए श्रीमानलाई यसरी बाँड्ने सम्झौता, तर जब एउटीले सम्झौता तोडिन्….
नेपालमा विवाहित पुरुष वा महिलाले सम्बन्ध विच्छेद नगरी अर्को विवाह गरे भने त्यो विवाहलाई गैर कानुनी मानिन्छ । तर पनि समाजमा एक पुरुषका दुई श्रीमति भएका उदाहरण धेरै देखिन्छन् । भारतको झारखंडमा दुई विवाह गरेका एक पुरुष र दुई श्रीमतिबीच अनौठो सम्झौता भएको छ ।
तर त्यो सम्झौता भंग भएपछि भने हंगामा भएको छ । एक विवाहित पुरुषको श्रीमतिले आफ्ना श्रीमान अर्की महिलासंग पनि लिभ इन टुगेदरमा बसेको थाहा पाइन् । तर श्रीमतिको विरोधका बावजुद उनले प्रेमिकासंग विवाह नै गरे । उनले ३१ डिसेम्बर २०१९ मा विवाह गरेका थिए । उनले श्रीमान र ति अर्की महिला विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन् ।
तर प्रहरीकहाँ एउटा अनौठो सम्झौता भयो । ती श्रीमानलाई दुईवटी श्रीमतिले तीन तीन दिनका लागि बाँडे । श्रीमान ३ दिन एउटी श्रीमतिसंग बस्ने र अर्को ३ दिन अर्की श्रीमतिसंग बस्ने सहमति भयो । एक दिन श्रीमानका लागि छुट्टी दिइयो ।
तर श्रीमान पहिलो श्रीमतिकहाँ गएको ३ दिन पनि पनि दोस्रो श्रीमतिकहाँ फर्केनन् । कान्छी श्रीमतिले श्रीमान आउने बाटो हेरेर बसिन् तर उनी नआएपछि कान्छी श्रीमति फेरी प्रहरी कहाँ गएकी छन् । उनले आफुलाई अन्याय भएको भन्दै प्रहरी कार्यालयमै धर्ना बसेकी छन् ।
न्याय नपाउँदा सम्म घर नफर्कने भन्दै प्रहरी कार्यालयमै धर्ना बसेपछि प्रहरीलाई पनि टाउको दुखाई भएको छ । पहिलो पत्नी भएर पनि झारखण्ड राँचीका राजेश कुमार नामका व्यक्तिले अर्की महिलासँग सम्बन्ध बनाएका थिए । जसका कारण यस्तो समस्या आएको हो ।